Mmelite ndụmọdụ ndụmọdụ njem: Ọnọdụ mberede gbasaa na Tunisia
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia » Mmelite ndụmọdụ ndụmọdụ njem: Ọnọdụ mberede gbasaa na Tunisia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Federal Public Service Foreign Affairs nke Belgium agbatịala ndụmọdụ ndụmọdụ njem maka Tunisia, na-ewepụta nkwupụta a:
N'ihi iyi ọha egwu, nke nwere ike ịdakwasị ndị njem si mba ọzọ, a ga-akpachapụ anya nke ọma. A ga-enyerịrị njem ọ bụla dabere na ihe egwu nchekwa butere. Ohere nke omume ndi ozo na-eyi ọha egwu na-eme. Ihe ize ndụ ndị metụtara ọrụ nke netwọkụ ndị na-eyi ọha egwu jihadist nọgidere, ọkachasị n'ihi nlọghachi nke ndị agha mbụ site na Daesh ruo Tunisia. A na-atụ aro ka ịmụrụ anya ma zere ọhaneze na ebe ọha na eze bara ọgaranya na nnukwu nnọkọ na igwe mmadụ.
Na Mahdia - Monastir - Sousse - Hammamet - Nabeul - Tunis - Bizerte - Tabarka n'ụsọ oké osimiri, n'àgwàetiti Djerba na n'ụsọ oké osimiri dị n'etiti Djerba na Zarzis. Onye njem na-eji amamihe ahọrọ ebe ọ ga-anọ bụ nke ewerela ihe ndị dị mkpa iji chebe ndị ahịa ya. Ekwesiri izere njem n'abalị na mpụga ụlọ nkwari akụ na ebe ndị mmadụ jupụtara, dịkwa ka njem abalị n'abalị n'èzí okporo ụzọ. Ndị nwe obodo nwere ike ịkwalite usoro nchekwa (eg ndenye ego, mmachi mmegharị). Ọ dị mkpa irubere ha isi.
Akpọghị njem na-ahazi aha na ndị ọzọ nke Tunisia. A na-atụ aro ka ndị ọrụ njegharị na ndị ọrụ njem njem enyere aka na ndị ọrụ nchekwa Tunisia.
Amachibidoro njem na mpaghara ókè ala na Algeria na ọdịda anyanwụ nke Tabarka - Jendouba - Kef - Kasserine - Gafsa - Tozeur - axis Nefta, yana mpaghara mpaghara Libya na ndịda mgbada Nefta - El Faouar - Ksar Ghilane - Ksar Ouled Soltane - Zarzis.
Ọtụtụ puku tọrọ atọ ka ụgbọ elu ụgbọ elu nwere ike kwụsị ...
Kenya agbatịla oge ọ ga -alọta, machibido nnọkọ ọha niile dịka…
Olumoko na-agba ọsọ maka onye isi oche ndị njem na ...
Red njem na-agbawa na China na 2021